Guddigii loo saaray dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Kenya oo ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay. | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Guddigii loo saaray dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Kenya oo ka hadlay waxyaabihii u...
Guddii madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle u xil saaray xaqiiqo raadinta khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Keya oo maalmihii lasoo dhaafay laga war sugayay ayaa maanta waxaa ay warbaahinta u sheegeen waxyaabihii u qabsoomay.
Shirkii urur Goboleedka IGAD ee bishii December ka dhacay magaalada Jabuuti ayaa madaxweyne Geelle loogu xil-saaray in uu ka shaqeeyo dib u dajinta xasaradda labada waddan ee dariska ah.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa markaas tallaabo u qaaday arrintan, wuxuuna xushay guddi xaqiiqo raadin ah oo ay horkacayaan safiirrada Jabuuti ee Soomaaliya iyo Kenya, Aadan Xasan Aadan iyo Yaasiin Cilmi Buux.
Guddigan ayaa isbuucii ay xaqiiqo raadinta ku howlanaayeen booqashooyin ku tagay magaalooyinka Muqdisho, Nairobi iyo deegaanka xadka ee Mandheera.
Markii ay Soomaaliya yimaadeen guddigu waxay la kulmeen wasiiru dowladaha xukuumadda ee Arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, Balal Maxamed Cismaan, iyo xog hayihiisa joogtada ah, Maxamed Calo-Nuur Xaaji.
Madaxda Soomaalida ayaa miiska saaray afar eed oo ay Kenya ka tabanayeen, kuwaasoo ay ka mid yihiin in xukuumadda Nairobi ay “ku xad gudubtay madaxbannaanida hawada iyo badda ee Soomaaliya”, in ay taageertay “maleyshiyaad ku howlan arrimo ka dhan ah dowladnimada Soomaaliya” iyo in ciidamada Kenya ee qeybta ka ah AMISOM “ay dayaceen xeryihii ay ku lahaayeen gudaha Soomaaliya”, taasoo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ururka Al-Shabaab ay u sahleyso inay dib usoo xoogeystaan.
Dhinaca Kenya waxay kula kulmeen Wasiirka Arrimaha Dibadda, haweeneyda lagu magacaabo Rachelle Omamo iyo wasiirka Gaashaandhigga oo iyadana lagu magacaabo Monica Juma. Waxaa kale oo ay kulamo la yeesheen wasiiru dowleyaasha wasaaradahaas iyo madaxa ciidanka difaaca Kenya Janaraal Robert Kibochi.
Ugu dambeyn guddiga reer Jabuuti warbixintooda u gudbiyeen xafiiska madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, oo hadda laga dhowrayo in uu war buuxa kasoo saaro waxa ka jira eedeymihii ay madaxda Dowladda Soomaaliya u jeedinayeen dowladda Kenya.
Madaxweyne Geelle ayaa hadda isha lagu wada hayaa, waxaana laga sugayaa in uu ku dhawaaqo natiijada ay guddigiisa soo saareen.
Danjire Buux ayaa sheegay in madaxweyne Geelle tallaaba uu qaadayo ay tahay in uu madaxda kale ee IGAD la wadaago xogta ay guddiga soo aruuriyeen
Maqaal horeGuddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Oo La Kulmay RW Rooble
Maqaal XigaFaahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya duqeymo ka dhacay koofurta Soomaaliya